अतिथि लेखक – बाह्रथरी कुरा
Author: अतिथि लेखक
अतिथी लेखकमा हामी हामीलाई हाम्रा पाठकहरुले पठाउनुभएका लेखहरु छाप्छौं। वहाँहरु को हो भनेर हामीलाई नै थाहा हुन्नँ।
Continue Reading “तर्क, वितर्क र कूतर्क” →
August 7, 2019 By अतिथि लेखक राजनिती, समाज, सामाजिक सञ्जाल कुतर्क, तर्क, रामेश, सुरेन्द्र के.सी.LeaveaComment
Continue Reading “सेक्सुअल ह्यारेस्मेन्ट – अपराधी व्यक्ति कि पेशाकर्मी सबै?” →
July 21, 2019 By अतिथि लेखक बाह्र सत्ताईस कुरा, समाज #MeToo #movement, अतिथी लेखक, यौन
Continue Reading “रेलका १२ थरी ‘रेलाकार’” →
May 16, 2019 By अतिथि लेखक प्रविधि, बाह्र सत्ताईस कुरा, राजनिती, समाजOne Comment
Continue Reading “ज्याक्सन हाईट्सका बाह्र सत्ताइस् ज्याकहरु” →
Continue Reading “ए भाइ…. चिया चुरोट ल्याइज त…..” →
केही समय यता सामाजिक सञ्जालको पक्ष विपक्षमा पत्रिकामा विभिन्न थरीका विद्वान एवम् स्वनामधन्य अभियन्ताहरूले आ-आफ्ना तर्कहरू राखिरहनु भएको कुरा त हजुरहरू सबैले देखिराख्नु भएको छ र आँखा टट्याइराख्नुभएकै छ । अहिलेको तात्तातो बहसको विषय पनि यही हो – सामाजिक सञ्जाल साच्चिकैको सामाजिक हो वा असामाजिक सञ्जाल हो। अब यसको चर्चा यत्र..तत्र.. सर्वत्र.. भइरहँदा हामी अछुतो हुने कुरै रहेन ।थरीथरीकामा पनि हामी त झन् १२थरी !
सामाजिक सञ्जाल आफ्नो कुरो निस्फिक्री राख्न मिल्ने ठाउँ मात्रै नभएर केही का लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न सक्ने एउटा डबली प्रमाणित भैसकेको छ! ओल्बाको गुलामी र सरकारको स्तूतीगान गर्ने ‘हनुमन्ते अभियन्ता’, शेर बादुर र काँग्रेसका मसिहा झैँ व्योहोरा देखाउने ‘कटप्पे अभियन्ता’, मधेस बाहेक अन्य विषय नदेख्ने ‘काल्झण्डे अभियन्ता’ लगायतका सयौंथरिका अभियन्ता र हजारौँ थरीका अभियानहरू नभएका भने पक्कै होइनन् । तर यिनको सधैँको ल्याङ्ल्याङ्लाई बाल दिँदै आज हामी अलि भिन्न प्रकृतिका वरिष्ठ ट्विटे/ट्विटी अभियन्ताहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ! लौ हजुर… अब फुलपाती लिनुस् र प्रत्येक ‘थरी’ को अन्त्यमा ‘अर्पणम् …..’ भन्दै त्यो यतै चढाउनुहोस् ।
Continue Reading “बाह्र सत्ताईस अभियन्ताहरू” →
November 26, 2018 By अतिथि लेखक बाह्र सत्ताईस कुरा
फर्मालिटी पुरा गरौं, नमस्कार ! सञ्चै हुनोला केरे ? धेरै बिषय उपर १२ थरी झटारोहरु त पढिनैरहनु भएको छ। कतिको बङगारा खुस्कने प्रहार आउने गरेकाले (हाम्रो सोचाइ हो है त्यो) क्वैक्वै “१२ थरी” भन्ने बित्तिकै झसंग झस्किने गरेका छन् भन्दारान् मार्केटाँ। खैर जे होस्, आफ्नै बयान अहिलेलाई नगरम् होला। १२ थरीमा आज अलि फरक त के भन्ने उही बंगारा ताक्ने जमर्को गरिरहेको छु। ठ्याक्कै मेरै बारेमा लेखेर मरेछ भनेर त भन्नुहोला, तैपनि रमाइलो मानेर पढिदिनु होला। मेरो बारेमा लेख्यो भनेर रिसाउनु भयो भने तपाइकै अनुहार कालो हुन्छ, हाम्लाई त बालै फरर हो। अझ लेखक स्वयंको बङगारा खुस्केला कि भनेर दाँत टम्म पारेर मुख बन्द गरेर लेखिरहेको स्थिति हो। शीर्षकमै प्रष्ट छ, के बारेमा लेख्न लाग्या हो भन्ने। Continue Reading “अनुहार हेर्‍यो मरिच, तै नि फोटो हाल्न परिच” →
March 8, 2017 By अतिथि लेखक प्रविधि, बाह्र सत्ताईस कुरा छन्द न बन्द, पातकी, सर्वव्यापी, हन्तकाली2 Comments